သဒ္ဓါလှိုင်း: January 2010
တနေ့မှာ…….. ခြင်္သေ့လေး တကောင်က သူ့အမေ ကို `ပျော်ရွှင်မှု ဟာ ဘယ်နေရာ မှာ ရှိလဲ´ ဆိုပြီး မေးခွန်းလေး မေးလိုက်ပါတယ်။ ခြင်္သေ့လေး ရဲ့ အမေက `မင်းရဲ့ နောက်မှာ ကပ်ပြီး ရှိနေတယ်´ လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ အဲဒါနဲ့ ခြင်္သေ့လေး က သူ့ရဲ့ အမြီးနောက်ကနေ ထပ်ကျပ်မကွာ ကပ်ပြီး လိုက်ရှာ နေခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တနေ့လုံး ကြိုးစားပြီး လိုက်ရှာ တာတောင် သူ့ရဲ့ နောက်မှာ ရှိနေတဲ့ ပျော်ရွှင်မှု ကို မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ ခြင်္သေ့လေးက သူ့အမေ ကို ပျော်ရွှင်မှု ကို မတွေ့တဲ့ အကြောင်း ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ သူ့အမေက ပြုံးပြီး ပြန်ဖြေ လိုက်တာက `မင်းရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု နောက်ကို ထပ်ကျပ် မကွာ လိုက်စရာ မလိုပါဘူးကွယ်… မင်းဟာ မင်းရဲ့ ရှေ့ ကိုပဲ လှုပ်ရှား သွားလာ နေရမယ်… အဲဒီအခါ မင်းရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု ဟာ မင်းနဲ့အတူ ရှိနေမှာပါ…´ တဲ့။ အားလုံး ဟာ မင်းရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု ကို ဖြစ်စေ ချင်ကြမှာပါ။
မင်းဟာ ဘ၀ တလျှောက်လုံးကို မဆုံးဖြတ် နိုင်ပေမဲ့ ဘ၀မှာ ဘယ်လို နေချင်လဲ ဆိုတာ ကိုတော့ ထိန်းချုပ် နိုင်မှာပါ…..
မင်းဟာ ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေကို အောင်မြင်အောင် မဖြေရှင်း နိုင်ပေမဲ့ မင်းရဲ့  စိတ်ကိုတော့ ထိန်းချုပ် နိုင်မှာပါ…..
မင်းဟာ မင်းရဲ့  သွင်ပြင် လက္ခဏာကို မထိန်းချုပ် နိုင်ပေမဲ့ မင်းကို မင်းတော့ ထိန်းချုပ် နိုင်မှာပါ…..
မင်းဟာ မနက်ဖန် ကို ကြိုမမြင် နိုင်ပေမဲ့ ဒီနေ့မှာ စဉ်းစဉ်း စားစား အသုံးချ နိုင်မှာပါ.....
မင်းဟာ အရာရာတိုင်းမှာ မအောင်မြင် နိုင်ပေမဲ့ အရာရာတိုင်းကို အောင်မြင်ဖို့ အကောင်းဆုံး ကြိုးစား နိုင်မှာပါ.....
လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ နေ့စဉ် ဘ၀ကို အသေအချာ ရင်ဆိုင်ဖို့ မျှော်လင့် ကြသလို အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်ဖို့ လည်း မျှော်လင့် ကြပါတယ်…..။
ပျော်ရွှင်မှု ဟာ မိမိနဲ့ အတူ အမြဲ ရှိနေမှာပါ။ မိမိရဲ့  အလုပ်၊ မိမိရဲ့  တာဝန် တွေနဲ့ ရှေ့ ကို အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင် သွားနိုင်မယ် ဆိုရင် ပျော်ရွှင်မှု ဆိုတာ ရှိနေမှာပါနော်.....။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 2:51 PM6comments:
မင်းဟာ တယောက်ယောက် နဲ့ စိတ်ဆိုးခဲ့မယ် ဆိုရင်…. အဲဒီ အနေအထား ကို ဘယ်သူမှ မပြင်ကြပါဘူး။ မင်းက ပြင်လိုက်ပါ။ ဒီနေ့ ပြင်လိုက်ရင် သူဟာ မင်းရဲ့ သူငယ်ချင်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်သွားမှာပါ။ အဲလိုမှ မလုပ်ခဲ့ရင် မနက်ဖန် ဆိုတာ သိပ်ကို နောက်ကျ သွားနိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာ တယောက်ယောက် ကို ချစ်ကြိုက် နေတယ် ဆိုရင်……. ဒါပေမဲ့ သူ့ကို ချစ်နေတာကို မသိဘူး ဆိုရင်……. သူ့ကို သိအောင် ပြောပြလိုက်ပါ။ ဒီနေ့ သူ့ကို ချစ်တယ်လို့ ပြောဖို့ ဖြစ်နိုင်စရာ ရှိပါတယ်။ ချစ်တယ်လို့ မပြောဖြစ်ခဲ့ရင် မနက်ဖန် ဆိုတာ သိပ်ကို နောက်ကျ သွားနိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာ သင့်ကို မေ့မေ့ လျော့လျော့ ဖြစ်နေတဲ့ သူကို ချစ်ကြိုက် နေတယ် ဆိုရင်……. သူ့ကို ထုတ်ပြော လိုက်ပါ။
သူဟာ သင့်ကို ချစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ဖွင့်မပြောဖြစ်ခဲ့ရင် မနက်ဖန် ဆိုတာ သိပ်ကို နောက်ကျ သွားနိုင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်း ကို ပွေ့ဖက်ဖို့ လိုအပ်ခဲ့ရင်……. သူငယ်ချင်းကို ပွေ့ဖက်ချင်တဲ့ အကြောင်း မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းဆိုပါ။
သူတို့ဟာ သင်လုပ်တာထက် ပိုပြီး ရင်းနှီးဖို့ လိုအပ်ချင် လိုအပ် နေမှာပါ။ ဒီနေ့ သင် ပွေ့ဖက်ဖို့ မတောင်းဆိုခဲ့ရင် မနက်ဖန် ဆိုတာ သိပ်ကို နောက်ကျ သွားနိုင်ပါတယ်။
ကျေးဇူး ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိခဲ့ရင်…. ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပြပါ။ သူတို့ကလည်း သင့်ကို ကောင်းကောင်း ကျေးဇူးတင်မှာပါ။ အဲလိုမှ မလုပ်ခဲ့ရင် သူတို့ ဒီနေ့ အဝေးကို ထွက်သွားမယ်ဆို မနက်ဖန် ဆိုတာ သိပ်ကို နောက်ကျ သွားနိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာ သင့်မိဘ တွေကို ချစ်ရင်... သင့်မိဘတွေ ကို ချစ်ကြောင်း ပြသပါ။ ပြသဖို့ အခွင့်အရေး မရှိခဲ့ဘူး ဆိုရင်… အခွင့်အရေး ရှိအောင် လုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့  မိဘတွေကို ပြဖို့ သင့်မှာ ခံစားချက် ရှိချင် ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲလိုမှ မပြခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ် ဒီနေ့ သင့်မိဘ တွေ ထွက်သွားခဲ့ရင် မနက်ဖန် ဆိုတာ သိပ်ကို နောက်ကျ သွားနိုင်ပါတယ်။
`ဒီနေ့ လုပ်ရမဲ့ အလုပ်ကို မနက်ဖန်ကို မရွှေ့ ပါနဲ့တဲ့´ ။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့ လုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်ကို အခုပဲ လုပ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံး လို့ ထင်မိပါတယ်။ အချိန် ရွှေ့ လိုက် ရင် ပြောင်းလဲ သွားနိုင် တယ်လေ။ တချို့ လုပ်ရမဲ့ အလုပ်တွေ ဟာ မနက်ဖန်ကို ရွှေ့ လိုက်လို့ မလိုလားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှု တွေ ရသွား တတ်ကြတယ်။ ဘယ်အရာ မဆို မနက်ဖန် ဆိုတာကို ရွှေ့ မနေပဲ ဒီနေ့ပဲ လုပ်လိုက်တာ ကောင်းပါတယ်။ တချို့  အရေးတကြီး ပြောရမဲ့ စကားတွေ ကလည်း မနက်ဖန် ကို ရွှေ့လိုက်တဲ့ အတွက် စိတ်ဒဏ်ရာ၊ အနာတရ တွေ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
မနက်ဖန် ဆိုတာ ကို မရွှေ့ပဲ ဒီနေ့ပဲ ပြောသင့်တာတွေ ၊ လုပ်သင့်တာတွေ ကို တွေဝေ မနေပဲ စိတ်အား ထက်ထက် သန်သန်နဲ့ ပြောဆို လုပ်ကိုင် နိုင်ပြီး အောင်မြင်မှု တွေနဲ့ ပျော်ရွှင်မှု ပန်းတိုင်ကို လျှောက်လှမ်း နိုင်ကြပါစေနော်..........။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 11:58 AM5comments:
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 1:49 PM5comments:
ခုချိန်မှာ ဘာကို လိုချင်သလဲ ဆိုရင် ငယ်ဘ၀ကို ပြန်လိုချင်တယ် လို့ ပြောရမယ်။ ဟုတ်တယ်….. တခါ တရံ ငယ်ငယ် တုန်းက ဘ၀ ကို ပြန်တမ်းတပြီး ပြန်မရတော့မှန်း သိပေမဲ့လည်း ပြန်လိုချင်မိတယ်။
ကျမ မှတ်မိနေတာ ကတော့ ကျမ ကျောင်းစ မတက်ခင် အရမ်း ဖျားလို့ ဆေးသောက်နေရင်း ဆေးနဲ့ မတည့်လို့ ဆေးရုံ ရောက်သွားရတယ်။ ကျောက်ကပ်က သွေးကြောလေးတွေ ပေါက်သွားတယ်တဲ့။ အဲဒီ မြင်ကွင်းလေး ကို အခုထိ မြင်ယောက် မှတ်မိ နေတုန်းပဲ…။ ကံကောင်းတယ်ပဲ ပြောရမလား ကျမ အသက် ဆက်ရှင်ခွင့် ရလိုက်တယ်။ ကလေးဆေးရုံ အရေးပေါ် ခန်းထဲမှာပဲ တပတ်လောက် နေခဲ့ရတယ်တဲ့။ ကျမ အမေက အရေးပေါ် ခန်းထဲမှာ နေတုန်းကဆိုရင် စိတ်မချလို့ နေ့ရော ညရော မအိပ်ခဲ့ဘူးတဲ့။ အိပ်နေတုန်း တခုခု ဖြစ်သွားမှာ ကြောက်လို့တဲ့လေ။ ကျမ တကိုယ်လုံး ပိုက်တွေ ဆိုတာ…….။ သွေးသွင်း၊ ဆေးသွင်း၊ နှာခေါင်း ထဲမှာလည်း အစာသွင်းထားတဲ့ ပိုက်ကြီးနဲ့ ကျမလေ နေရ ခက်လိုက်တာ…။ အဲဒီ အချိန်တုန်းက မြင်ကွင်း ကတော့ မှတ်မှတ်ရရ ပါပဲ။ နောက် နေကောင်းပြီး ဆေးရုံက ဆင်းခါနီး ဘာစားချင်လဲလို့ မေးတော့ ကျမ အကျယ်ကြီး ဖြေလိုက်တာက လိမ္မော်သီး စားချင်တယ်တဲ့။ ကျမကို လိမ္မော်သီး ခြင်းလိုက်ဝယ်ပြီး ဘေးနားမှာ ထားပေး ထားတာကိုလည်း မှတ်မိ နေတုန်းပဲ…။
နောက် ကျမ သူငယ်တန်း ကျောင်းစတက်တော့ ကျောင်းကနေ ထွက်ထွက် ပြေးတာကို အမှတ်ရတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အမေနဲ့ တခါမှ မခွဲဘူးတော့ အမေ့နောက်ကို ပြန်လိုက်တာ။ ကျမ အဖေ က ကျမတို့ မောင်နှမတွေကို မူကြို မထားခဲ့ပါဘူး။ အိမ်မှာ ငါးနှစ်ပဲ နေရမှာမို့လို့ အေးအေး ဆေးဆေး နေပါစေတဲ့။ ဒါကြောင့် သူငယ်တန်း စတက်တော့ သူများ ကလေးတွေက အေးဆေး ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကျမက အရမ်း ၀မ်းနည်း ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီ အချိန်က စပြီး ဝေးကွာခြင်း ဆိုတာ ကို စပြီး ခံစား လိုက်ရသလို ပါပဲ……. ။ တခါ တလေ ကျောင်းကနေ အပြန်မှာ မိုးတွေရွာလို့ ကျမ အဖေရဲ့ ကျောကုန်းမှာ လိုက်ပြီး လာခဲ့ရတာကိုလည်း အခုနေ လွမ်းမိတယ်…….။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကလေးဘ၀ တုန်းက ဘာအပူအပင်မှ မရှိတော့ ပျော်စရာ တွေနဲ့ပေါ့။ အိမ်မှာ မောင်နှမတွေ ကျောင်းပိတ်ရက် ဆို ကစားကြ၊ စားကြ၊ စကားနိုင် လုကြနဲ့။ ကျမတို့ မောင်နှမတွေကို အဖိုးက အိမ်ပြင် ထွက်ပြီး မကစားရပါဘူး။ ကိုယ့်ခြံထဲမှာပဲ ကစားကြ ရပါတယ်။ တခါတရံ မှာတော့ မောင်နှမ ၀မ်းကွဲ နှစ်ယောက် လာလည် တတ်ပါတယ်။ သူတို့ကလည်း သိပ်ကို လာခဲပါတယ်လေ။ လာခဲ့ရင်လည်း ပျော်ပြီး မပြန်ချင်လို့ အိမ်ပြန်ခါနီးဆို ပုန်းနေတတ်ကြတယ်။ ပြီးတော့ ကျမတို့ မောင်နှမတွေ စကားနိုင် လုကြတာက ကိုယ်တက်တဲ့ ကျောင်းကို ဘယ်လောက် ကောင်းကြောင်း၊ ဆရာမတွေ ဘယ်လောက် တော်ကြောင်း ပြိုင်ပြောကြတာ……။ ကျမကလည်း ကျမကျောင်းက ဘယ်လောက် လှကြောင်း၊ ဘယ်လောက် ကြီးကျယ်ကြောင်း၊ ဘယ်လောက် ကျယ်ကြောင်း၊ ဆရာမတွေ ဆိုလည်း အရမ်းတော်ကြောင်း ပြိုင်ရတာလေ။ ကျမ အကိုတို့နေတဲ့ ကျောင်းက ကျမတို့ကျောင်းလို မကျယ်လို့လေ။ အခုချိန် ပြန်တွေးရင် အခု လွမ်းမိတဲ့ အကြောင်းလေးတွေပေါ့……….။
တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာတာနဲ့ အမျှ ကိစ္စတွေ များလာသလို၊ အပူအပင်တွေ များလာသလို၊ စိုးရိမ်မှုတွေ ပြည့်နေသလို၊ တာဝန်တွေ ပိုများလာ သလို၊ ခံစားရမှုတွေ ပိုများလာသလို၊ အများကြီး ပါပဲ……………
ဘ၀ မှာ အကြောက်ဆုံး စကားလုံး ဖြစ်တဲ့ ဝေးကွာခြင်း ဆိုတာကိုလည်း တစတစ ပိုနားလည်ခဲ့ ရတယ်။ အရာ အားလုံးဟာ နီးမလိုလိုနဲ့ တကယ်တော့ အဝေးကြီး ပါပဲ။ တနေ့နေ့မှာ အားလုံးနဲ့ ဝေးရမယ်၊ ခွဲခွါရမယ် ဆိုတာ သိနေပေမဲ့လည်း တကယ် ရင်ဆိုင်ဖို့တော့ မလွယ်ကူပါဘူး။
ကိုယ်တန်ဖိုးထားရတဲ့ အရာတွေနဲ့ ဝေးကွာ နေရပေမဲ့ ဘာမှ မဖြစ်သယောင် ဟန်ဆောင် ရတာလည်း အကြီးမားဆုံး စိတ်ပင်ပန်းမှု ပေါ့……………။
ဟန်ဆောင်ရတာဟာ ကျမရဲ့ အညံ့ဆုံး၊ မလုပ်ချင်ဆုံး၊ အမုန်းဆုံး အလုပ်တခု မို့လို့လည်း ပိုပြီး စိတ်ပင်ပန်း ရတယ်.။
ဟန်ဆောင်ခြင်း ကို မုန်းတဲ့ ကျမ... ဟန်ဆောင်ခြင်း ကင်းတဲ့ ငယ်ဘ၀ ကို ပြန်လိုချင်တာ မဆန်းပါဘူးနော်….။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 1:49 PM6comments:
Labels: ငယ်ဘ၀ကို တမ်းတခြင်း
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 10:50 AM 1 comment:
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 1:05 PM 1 comment:
မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း သဘောထား ကွဲလွဲလာရင် ဘယ်လို ပြန်လည် ဖြေရှင်း ကြမလဲ...။
သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း ခိုက်ရန်ဒေါသ ဖြစ်ခြင်းဟာ လူတိုင်းလူတိုင်း အတွက် ကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တခု မဟုတ်ပါဘူး။ မရည်ရွယ်ပဲ ပြောလိုက်တဲ့ စကားတခွန်းဟာ တခြားသူမှာ စိတ်ဒဏ်ရာ ရသွားစေနိုင်ပါတယ်။ တခါတရံမှာတော့ ကျမ တို့တွေ ဟာ မှားတာကို ၀န်မခံချင် ကြပါဘူး။ တောင်းပန်ဖို့လည်း မလုပ်ချင် ကြပါဘူး။ သဘောထား ကွဲလွဲပြီးရင် ပြန်ပြုပြင်လို့ မရဘူး၊ ပြန်ဖြေရှင်းလို့ မရဘူးလို့ ထင်ကြပါတယ်။
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ ကြားမှာ သဘောထား ကွဲလွဲမှု၊ ပဋိပက္ခ ဖြစ်လာရင် ပြန်ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ နည်းလမ်းတွေ ကတော့ အောက်မှာ ပြောထားပါတယ်…။
ငြိမ်ငြိမ် နေပေးပါ။ စိတ်လှုပ်ရှား ထိခိုက်မှု များလာတဲ့ အခါ အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် မစဉ်းစားနိုင်တော့ပါဘူး။ နောက်တဖန် ပဋိပက္ခ ဖြစ်စရာ မစဉ်းစားပဲ ငြိမ်ငြိမ် နေလိုက်ပါ။
တယောက်နဲ့ တယောက် လေးစားမှု ရှိပါ။ လေးစားမှု မရှိခဲ့ရင် ပဋိပက္ခကို အခင်အမင် မပျက် ပြန်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အလားအလာ မရှိတော့ပါဘူး။
တယောက်နဲ့ တယောက် အသိအမှတ် ပြုပါ။ သိပ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှား၊ ဒေါသ ဖြစ်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ရှောင်ထွက် သွားလိုက်ပါ။
တယောက်နဲ့ တယောက် အချိန် တခု ပေးပါ။ စိတ်ပြင်းထန်မှု လျော့ပါးတဲ့ အချိန်ဟာ ဆင်ခြင်တုံ ရှိတဲ့ အပြုအမူ တခု ပြီးမြောက်ဖို့ အတွက် ကူညီပါလိမ့်မယ်။
တယောက်ရဲ့ အချိန်ကို အခြား တယောက်က လေးစားပါ။ တယောက် အသိအမှတ် ပြုခြင်းကို တယောက်က လေးစားပါ။ လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ မတူညီ နိုင်ပါဘူး။ ပဋိပက္ခ တခုကို ဖြေရှင်းဖို့ အဆင်သင့် မဖြစ်ခင် မင်းရဲ့ သူငယ်ချင်းက ရက်သတ္တပတ် လိုအပ်ချင် လိုအပ်မယ်။ မင်းကတော့ တရက်ပဲ လိုချင်လိုမှာပါ။ ဒါကြောင့် သူလိုအပ်မဲ့ အချိန်တခုကို ပေးလိုက်ပါ။
ဆက်ဆံမှု ပြေပြစ်အောင် နေပါ။ စကားပြော နည်းခြင်းကလည်း ဆိုးတဲ့ ကိစ္စ တခု ဖြစ်ပါတယ်။ အခါအားလျော်စွာ သူနဲ့ ပက်သက်ပြီး သူ့ကို ဂရုစိုက်တဲ့ အကြောင်း သူသိအောင် ဆက်သွယ် ပြောဆိုပေးပါ။
ကောင်းမွန်စွာ နားထောင်ပေးပါ။ စူးစူးစိုက်စိုက် နားထောင်ပေးပါ။ သဘောထားကြီးစွာနဲ့ သူ့ရဲ့ အမြင်ကို အာရုံစိုက် နားထောင် ပေးပါ။
မင်းပြောမဲ့ စကားလုံးတွေကို ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် စဉ်းစားပြီးမှ ရွေးချယ်ပါ။ `မင်းက ဘယ်တော့မှ……….´၊ `မင်းက အမြဲတမ်း…………´၊ `မင်း ဘာဖြစ်လို့……………´ ဆိုတဲ့ ပြစ်တင်သံ ပါတဲ့ စကားလုံးမျိုးကို မပြောမိအောင် ရှောင်ကြဉ်ပါ။
`ဒါပေမဲ့…….´ ဆိုတာ မပါ ပါစေနဲ့။ ` ဟုတ်တယ်………..ဒါပေမဲ့´ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မပြောမိ ပါနဲ့။ အဲလို စကားလုံး တွေဟာ နောက်ဆုံးမှာ စိတ်နာကျင်မှု ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ `ငါ နားလည်ပါတယ်……………ဒါပေမဲ့´ ဆိုတာလည်း မပြောမိပါနဲ့။
ပြီးတာ ပြီးပါစေ။ အခြေခံ တူညီမှု မတွေ့ရင်၊ သဘောထား တိုက်ဆိုင်သည် ဖြစ်စေ မတိုက်ဆိုင်သည် ဖြစ်စေ၊ ပြီးတာ ပြီးပါစေ။ အဲလိုမျိုး မလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ သဘောထား ကွဲလွဲမှု၊ ပဋိပက္ခ ကို ဖြေရှင်းလာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ ချစ်သူ ခင်သူတွေလည်း တခါမဟုတ် တခါတော့ သဘောထား ကွဲလွဲမှု လေးတွေလည်း ရှိကြမှာပါ။ အဲဒီအခါ ဘယ်လို ပြန်ဖြေရှင်းမလဲ ဆိုတာက အရေးကြီးပါတယ်။ ဖြေရှင်းတာ အဆင်မပြေရင်လည်း တယောက်နဲ့ တယောက် ဆက်ဆံဖို့ ခက်သွားပါပြီ…။ ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ့်ဘက်က နားလည်မှု ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တခြားတယောက်ကို နားလည်မှု ပေးလိုက်တာဟာ ပဋိပက္ခ ဖြစ်တာကို ပြန်ပြီး ဖြေရှင်း သွားနိုင်မှာပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ တယောက်နဲ့ တယောက် ပဋိပက္ခ မဖြစ်တာ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်း အကောင်းဆုံး ပြန်ဖြေရှင်းနိုင်ကြပါစေ………..။
http://www.funzug.com/index.php/relationships/how-to-resolve-conflicts-with-friends.html မှ ဘာသာပြန်သည်။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 2:52 PM3comments:
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 1:49 PM No comments:
အမြဲတမ်း ရင်းနှီးချစ်ခင်မှု ရချင်ရင် အနိုင်ရဖို့ချည်း အားမထုတ်ပါနဲ့………။
ချစ်သူ စုံတွဲတွေမှာတောင် မင်္ဂလာဆောင် လက်တွဲကြပြီးရင် ဆက်ဆံရေးတွေ လျော့ကျသွားတတ်ကြတယ်တဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တဦးအပေါ် တဦးလွှမ်းမိုးဖို့ ကြိုးစားရင်း၊ တောင်းဆိုချက်တွေ အလွံအကျွံ တောင်းကြရင်းပေါ့။ သူတို့ ချစ်သူတွေရဲ့ အကျင့်ဆိုးလေးတွေကို အချစ်နဲ့ အရာရာ ပြင်ဆင် သွားနိုင်မယ်လို့ ထင်နေကြတယ်။ အမှန်တကယ်မှာတော့ အဲလို မဟုတ်ခဲ့ကြပါဘူးတဲ့…….။
အဲဒီ အယူအဆက တရုတ် စကားပုံ က လာတာပါ………….။ စကားပုံက......
`တောင်ကြီးတွေ၊ မြစ်ကြီး တွေကိုသာ လိုသလို ပြုပြင်လို့ ရချင်ရမယ်……..လူတွေရဲ့စရိုက် ကိုတော့ ကိုယ် လိုချင်တဲ့ ပုံစံဖြစ်အောင် ပြုပြင် ပုံသွင်းဖို့ မလွယ်ကူ ပါဘူးတဲ့…..´
ချစ်သူကို ကိုယ်လိုချင်သလို ပြောင်းလဲပုံသွင်းဖို့ အရမ်းမျှော်လင့်ပြီး ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင် စိတ်မချမ်းသာစရာ တွေ၊ စိတ်ပျက်စရာတွေ ကြုံတွေ့ လာရလိမ့်မယ်။
မျှော်လင့်ချက် နဲနဲနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြင်ယူသွားမယ် ဆိုရင် ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေ ရလာ နိုင်ပါတယ်........။
တယောက်နဲ့တယောက် အမြဲရင်းနှီးချစ်ခင်နေဖို့ တပါးသောသူကို လွှမ်းမိုးအနိုင်ယူဖို့ မပြုလုပ်မိရင် အကောင်းဆုံးလို့ ထင်မိပါတယ်။ အနိုင်ယူချင်စိတ် များနေရင် တဘက်ကလည်း တဖြည်းဖြည်း စိတ်ပျက် သွားမိပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် တခြားတယောက်အပေါ် တတ်နိုင်သမျှ အနိုင်ယူလို စိတ်မထားမိဖို့ အမြဲ ဆင်ခြင်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်…….
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 10:57 AM 1 comment:
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 1:57 PM2comments:
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 11:56 AM3comments: